ဟေတီနိုင်ငံသို့ စစ်တပ်စေလွှတ်ရန် အစီအစဉ်မရှိသေးဟု ဘိုင်ဒန် ပြောကြား - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်က ဝါရှင်တန်ဒီစီ အိမ်ဖြူတော်တွင် မီဒီယာများနှင့် ဇွန် ၂၉ ရက်က တွေ့ဆုံစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဝါရှင်တန်၊ ဇူလိုင် ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
လက်ရှိတွင် ဟေတီနိုင်ငံသို့ စစ်တပ်စေလွှတ်ရန် အမေရိကန်တွင် အစီအစဉ်မရှိသေးဟု အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်က ဇူလိုင် ၁၅ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ဟေတီနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံသံရုံး၏ လုံခြုံရေးနှင့် ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် မရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုသာ စေလွှတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အခြားတပ်ဖွဲ့များကို ဟေတီသို့ စေလွှတ်ရန် လက်ရှိတွင် အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်း ဘိုင်ဒန်က ယင်းနေ့ညနေပိုင်း အိမ်ဖြူတော်တွင် မီဒီယာများအား ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန် သံတမန်ရေးရာမစ်ရှင်များ၏ လုံခြုံရေးကို မရိန်းတပ် သံရုံးလုံခြုံရေးအဖွဲ့က တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဟေတီနိုင်ငံအတွင်း ယိုးယွင်းနေသော အခြေအနေအား ထိန်းသိမ်းရာ၌ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဝင်ရောက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ဟေတီနိုင်ငံ၏ တောင်းဆိုမှုအပေါ် စဉ်းစားသုံးသပ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ၊ စစ်တပ်စေလွှတ်ရန် မဖြစ်နိုင်သည်တော့ မဟုတ်ကြောင်း အိမ်ဖြူတော်သတင်းပြန်ကြားရေးမှူး Jen Psaki က ဇူလိုင် ၁၂ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဇူလိုင် ၇ ရက် နံနက်ပိုင်းက ဟေတီ သမ္မတ ဂျိုဗီနယ်လ်မော်စီသည် နေအိမ်တွင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၏လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုခံခဲ့ရသည်။ လူ ၂၈ ယောက်ပါဝင်သည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က ဂျိုဗီနယ်လ်မော်စီအား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့တွင် အမေရိကန် နိုင်ငံသား ၂ ဦးနှင့် ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသား ၂၆ ဦး ပါဝင်ကြောင်း ဟေတီရဲတပ်ဖွဲ့က ဆိုသည်။ ဟေတီနိုင်ငံရှိ အရေးကြီးသော အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ယိုယွင်းပျက်စီးနေသည့် အခြေအနေကို တည်ငြိမ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် ဟေတီအစိုးရက အမေရိကန်နိုင်ငံထံ အကူအညီတောင်းခံထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
1. U.S. President Joe Biden speaks to the press before leaving the White House in Washington, D.C., the United States, on June 29, 2021. (Photo by Ting Shen/Xinhua)